HomeWararka CiyaarahaWararka Suuqa Maanta: Manchester City oo Dooneysa Saxiixa Toni Kroos, Heshiiska Paul Pogba iyo Qodobo kale
October 24, 2021 Wararka Ciyaaraha, Suuqa kala iibsiga, Wararka Wargeysyada 0
Kabtanka kooxda Wolves ee Conor Coady ayaa ku jira liiska Newcastle ee ay doonayso suuqa January iyada oo 28 jirka reer England ay u badan tahay inuu ku kacayo 20 milyan oo gini. (Thesun)
Dhanka kale, garabkii hore ee Netherlands Marc Overmars ayaa wadahadalo la furay Newcastle si uu u noqdo agaasimahooda cusub ee kubadda cagta, doorka uu hadda ku leeyahay Ajax . (Mirror)
Manchester United ayaa sameyn doonta wax walba oo karaankeeda ah si ay khadka dhexe ee reer France Paul Pogba ugu sii heysato Old Trafford iyadoo Real Madrid ay rajeyneyso inay si xor ah kula soo wareegto 28 jirkaan dhamaadka xilli ciyaareedkan. (AS)
Si kastaba ha ahaatee, Pogba ayaa rajeynaya inuu ku soo bilowdo kulanka Manchester United ee ay wajahayaan Liverpool maanta, islamarkaana uu caddeeyo inuu u qalmo qandaraas cusub oo uu isbuucii ku qaadanayo 350,000 oo ginni kooxda ka dhisan Old Trafford. (Dailymail)
Weeraryahanka Teenage FC Dallas Ricardo Pepi ayaa soo jiitay xiisaha kooxo badan oo Premier League ah iyadoo Liverpool , Manchester United , Brentford iyo Brighton ay ka mid yihiin kuwa xiiseynaya 18 jirkaan Mareykanka ah. (Mirror)
Tababare Brendan Rodgers ayaa beeniyay wararka sheegaya in ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Belgium Youri Tielemans uu diiday qandaraas cusub oo uu kula jiro Leicester City iyadoo 24 jirkaan uu soo jiitay xiisaha kooxo badan oo ay ku jiraan Liverpool iyo Manchester United . (Dailymail)
Weeraryahanka reer Argentina Paulo Dybala, oo 27 jir ah, ayaa heshiis la gaaray Juventus oo ku saabsan qandaraas cusub. (Calciomercato)
Chelsea ayaa uga digtay Sevilla in kooxda reer Spain aysan qiimo jaban ku iibin doonin xiddiga reer France ee Jules Kounde oo 22 jir ah. (Thesun)
Tababaraha Manchester City Pep Guardiola ayaa eegaya ciyaaryahanka khadka dhexe ee Real Madrid Toni Kroos iyadoo 31 jirkaan uu qandaraaskiisu dhacayo 2023. (El Nacional)
Dhanka kale, Manchester City ayaa qarka u saaran inay siiso weeraryahanka reer Spain Ferran Torres, oo 21 jir ah, heshiis cusub oo socon doona ilaa 2027 iyadoo mushaarkiisu uu kor u kici doono £ 100,000 toddobaadkii. (Daily Star)
Everton ayaa hogaamineysa tartanka loogu jiro saxiixa Jesse Lingard oo ka tirsan Manchester United laakiin 28-jirka khadka dhexe ee England ayaa sidoo kale waxaa doonaya West Ham iyo Newcastle . (FootballInsider)
Weeraryahanka Atletico Madrid iyo Urguay Luis Suarez ayaa doonaya inuu kooxda sii joogo wax ka badan xilli ciyaareedkaan. 34 jirkaan ayaa dhaliyay shan gool xilli ciyaareedkan laakiin heshiiskiisu wuxuu ku eg yahay xagaaga soo aadan. (Marca)
Ajax ayaa doonaysa inay sii haysato qadka dhexe ee reer Holland Ryan Gravenberch, kaasoo soo jiitay xiisaha kooxo ay ka mid yihiin Liverpool, Manchester United, Barcelona iyo Juventus, wuxuuna ka shaqeynayaa inuu heshiis cusub u saxiixo 19 jirkaan. (Fichajes)